သန့်ရှင်းခြင်းသခင်ယေရှု၏နောက်လိုက်အက | Apg29
ကယျတငျတျောမူခွငျးသို့မဟုတျမျှတမှု, ယရှေုတွင်ဒုတိယကျနော်တို့အလှည့်ရာအရပ်ကိုကြာ, သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲသို့လှုံ့ဆော်ပေး။ သန့်ရှင်းခြင်းသို့သျောလညျး, ငါတို့ကလူနှင့်ခရစ်ယာန်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းယေရှုနှင့်အတူလမ်းလျှောက်တဲ့ရာသက်ပန်ဖြစ်စဉ်သည်ကမ္ဘာနှင့်အသားကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအတွက်လျော့နည်းလမ်းညွှန်အင်အားသုံးဖြစ်လာစဉ်တွင်, ယရှေု, ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာနှင့်တဆင့် ပို. ပို. မြင်နိုင်စေနိုင်ပါတယ်။
ဂရိစကားလုံး "hagiasmós" ဓမ်မဟောငျးကမျြးဟီဘရူး "Kadas" မှနှင့် NT အတွက်နှစ်ဦးစလုံးထိုစကားလုံးသန့်ရှင်းစေခြင်း, တစ်ဦးသည်ကမ္ဘာ့ထံမှခွဲခြာနှင့်၎င်း၏ "ဝိညာဉ်" ဟူသောစကားလုံးသန့်ရှင်း၏။ ဒါကနည်းလမ်းညစ်ညူးခြင်းနှင့်အဓမ္မဖြစ်တယ်, အစားသခင်ဘုရား၏ကိုယ်စားအဘို့နှင့်ကိုယ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်သောအရာဆိတ်ကွယ်ရာအစုဖြစ်ခြင်းထက်ကြောင်းသောအရာကနေခွဲခြာ။
ယောဟန်သည်ဟူသောဝေါဟာရကိုကမ္ဘာတွင် 1 ယော2အဘို့ဖြစ်၏အရာကိုဖော်ပြချက်စေသည်း 15-16
" မတ်ေတာသညျမဟုတျဘဲကမ္ဘာကြီးမဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏သောအရာတို့ကို။ မည်သူမဆိုကိုခစျြလြှငျကမ်ဘာခမညျးတျော၏မတ်ေတာသူ့ကိုအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ်ဘာပျေါတှငျကြောင်းအလုံးစုံတို့အဘို့, ဇာတိပကတိနှင့်မျက်စိနှင့်ကောင်းမွန်သောအသက်တာ၏မာန၏အလိုဆန္ဒများကြောင့်ခမည်းတော်ထံမှပေမယ့်ကမ္ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ "
မတရားသောမေထုန်ကိုညစ်ညူးစွာကျင့်ခြင်း, ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်း, တတ်, ရန်ငြိုး, ရန်တွေ့, ငြူစူသောစိတ်, အမျက်ဒေါသ၏ကြိမ်တိုင်တိုင်: ပေါလုကိုငါသညျလညျးသညျပေါလုသည်ဤဖျောပွထားသ "ဝိညာဉ်" ဟူသောဝေါဟာရကိုကမ္ဘာတွင်နှင့်၎င်း၏အောက်တွင်လာလတံ့သောဇာတိပကတိ၏အကျင့်လောက်ပြောတတ် 16-21: ဂလာတိ5ခုနှစ်တွင် ရန်တွေ့ခြင်း, schisms ယူဖောက်ပြန်, ညစ်ခြင်း, မူး, လိုက်စားကျူးလွန်လာစေရန်။ သန့်ရှင်းခြင်းအပေါ်ကျမ်းစာရဲ့သင်ကြားမှုနှင့်အတူလက်၌လက်, သမ္မာကျမ်းစာဟာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်သညျယရှေုခရစျသလက်ခံခဲ့သည်ကြသောသူတို့၏အကြောင်းကိုပြောသောအဖြစ်, ထိုလူတစ်ဦးမြင့်မြတ်ဖြစ်ပါသည်: ရောမ 1:7" ... ဘုရားသခင်၏ချစ်ရာသခင်သည်သင်တို့က, မိမိအသန့်ရှင်းသူတို့အဖြစ်ခေါ်" 1 ကောရိန်သု သူအဖြစ်ကမ္ဘာ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကျွန်တော်သူ့ရှေ့မှာသန့်ရှင်းသောအခြင်းနှင့်အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်လိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်တော်မူပြီမတိုင်မီ 1::2"4 ကောရိန်သုဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကိုရန်, ယေရှုခရစ်၌သန့်ရှင်းစေသောသူတို့အား, သူတို့ကသန့်ရှင်းသူတို့အဖြစ်ခေါ် ... ဧဖက် 1" "။
ကျမ်းစာကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသန့်ရှင်းစေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. တော်တော်များများသောနေရာများအတွက်ပြော၏။
1 သက်သာလောနိတ် 5:23 ပြောပါတယ် , "မေလငြိမ်သက်ခြင်း၏အရှင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သင်တို့ကိုအကုန်အစင်သန့်ရှင်းစေ ... "2သက်သာလောနိတ် 2:13 ပြောပါတယ် " ... ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်သမ္မာတရားကိုယုံကြည်ချက်မှတဆင့်" ဟေဗြဲ 2:11 အဘယ်သူသည်သနျ့ရှငျးသူတို့အဘယ်သူသည်ယေရှု၏ပြောတတ် သန့်ရှင်းစေ။ ကျွန်တော်တို့ကိုသနျ့ရှငျးအဆိုပါစကားလုံး: ယောဟန် 17:17 "အမှန်တရားမှာသနျ့ရှငျးသူတို့ကို; သင့်ရဲ့စကားလုံးအမှန်တရားဖြစ်၏။ "
ယုံကြည်သူမိမိတို့၏ဘဝအသက်တာ၌သန့်ရှင်းခြင်း၏အလုပျအတှကျမိမိကိုယျကိုရရှိနိုင်စေသည်: 1 သက်သာလောနိတ် 4: 7.8 ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌ဒုစရိုက်အပြစ်တို့ကိုခုခံကာကွယ်ဘယ်တော့မှမည်! သို့သော်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်သနားဖို့ညွှန်ပြသည့်အခါ, ငါတို့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဝန်ခံ, ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်အပေါင်းတို့နှင့်ဖြောင့်မတ်ရာမှကျွန်တော်တို့ကိုကင်းစင်စေပါလိမ့်မယ်။ 1 ယော 1း9
" ဘုရားသခင့ညစ်ညူးသောအဒါပေမယ့်အဘို့သန့်ရှင်း၏အသက်တာငါတို့ကိုခေါ်မထားပါဘူး။ ဒါကြောင့်ယခုဤသူသည်သင်တို့မူကား, မိမိသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ပေးတော်မူပြီတော်မူသောဘုရားသခင်၏ငြင်းပယ်ပါဘူးပယ်ချထားသည်။ " 1 Th 4: 7, 8
ရောမမွို့ရှိ 6:19 ရမ္မက်ကိုဖြောင့်မတ်၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက်သန့်ရှင်းစေခြင်းငါတို့၏ကိုယ်အင်္ဂါမမေးနှင့်2ကောရိန္သု 7: မွေ့လျော်ခြင်းစုံလင်သန့်ရှင်းခြင်း 1 မှ ပေး. တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လော့ကျွန်တော်တို့ကို။
သူဟာလေးစားမှု, လက်အောက်ငယ်သား, နာခံမှု, ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုနှိမ့်ချကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်နှစ်ခြိုက်ခံထိုက်ပေ၏။
ဒါဟာဆန့်ကျင်သွားပါနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကြည့်ဖို့လိုသည်ဘယ်မှာတစ်ခုခုအပေါ်ထွန်းလင်းအခါ Word, တစ်ခုခုပြသသည့်အခါလျစ်လျူရှုဖို့မအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဘယ်အချိန်မှာဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏; ထိုကဲ့သို့သောအချိန်များတွင်ရုံကဒါညျဘုရားသခငျ၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဖို့ဒုက္ခခံစားခဲ့ရ, ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့မဟုတ်ပါဘူး, ကလျစ်လျူရှု, ဒါမှမဟုတ်ထင်လျှင်ဒီ, သင်တို့ကိုငါနေဖြင့်ရပ်တန့်ဖို့လိုကွောငျး, ငါ့ကိုနှမပေးပါ။ "သင်ရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့အဘို့တံဆိပ်အဖြစ်ရရှိထားဘယ်သူကိုညျဘုရားသခငျ၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေမဟုတ်။ " ဧဖက် 4:30 ။
ဒါကြောင့်သင်တို့သည်သခင်ဘုရားအထဲကထောက်ပြလျစ်လျူရှုတဲ့အခါအချိန်ကြာမြင့်စွာပင်ဖြစ်သည်လျှင်, လျော့နည်းသူတို့တဦးတည်းရဲ့အတွင်းစိတ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်၏အနိမ့်-key ကိုအသံဖြင့်အဖြစ်ရိပ်မိ, တဦးတည်း "တုံး" ဖြစ်လာသည်။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်းပိုင်းကိုမကြာခဏတိတ်တဆိတ်ပြော၏။
ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝကနေဥပမာတစ်ခုပေးလိမ့်မယ်။ အစောပိုင်းကငါအရမ်းမကြာခဏ TV ပေါ်မှာကြည့်လိုက်သည်။ ငါအချို့တီဗီအစီအစဉ်များကိုမြင်သောအခါငါထို့နောက်အလွန်ရှင်းလင်းသောအတှေ့အကွုံခဲ့တစ်ခုခုကိုကြောင့်တုန့်ပြန်နှင့်ဒုက္ခရောက်နေဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်လောက်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ငါ့အထဲမှာအများကြီးအယုတ္တအနတ္တသို့မဟုတ်မစင်ကြယ်သောအရာများ, ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတွေ့ရှိခဲ့, ငါကြည့်ရှုအဖြစ်ဥပမာတစ်ခုခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရဲပြပွဲအစီအစဉ်ကိုသို့မဟုတ်ဒရာမာဘို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်သည့်အခါ, ငါသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့သတိပေးချက်ကိုလျစ်လျူရှု, ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောရဲ့အနိမ့်သော့ချက်စိန်ခေါ်မှုအဖြစ်မရှိတော့ပဋိသန္ဓေယူနိုင်အောင်, ထိုကဲ့သို့သော program တစ်ခုအပေါ်ကြည့်ဖို့ဆက်လက်ခဲ့သည်။ ငါသူဒုက္ခရောက်နေဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်လိုမရှိတော့ငါသိမြင်၏။
ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲ ကောင်းပြီ, ဘာဆက်ဖြစ်ငါ့နှလုံးသညျဘုရားသခငျ၏သနျ့ရှငျးခွငျးစပ်လျဉ်းကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေခံရခဲ့ပဲ! ကြောင်းတိကျသောအရာပေါ်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသံကိုနီးပါးရပ်တန့်ခဲ့သည်။ appallingly
အခုတော့အနည်းငယ်သာရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်သောသူ၏စိတ်တော်မထားဘူး, ကြှနျုပျတို့နောင်တရရန်လိုအပ်ရှိရာဖော်ပြသောဒေသများရှိစဉ်းစားပါ။
သနျ့ရှငျးမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အကူအညီရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကပို "ကိုင်းရှိုင်း" ကိုသန့်ရှင်းစေရစျယာနျဖြစ်လာဖို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပုံကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာအားလုံးလုံလောက်သောသိကြပေမယ့်အဘယ်အရာကိုကြှနျုပျတို့သညျဤလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့မေ့လျော့ခြင်းသို့မဟုတ်ဘုရားသခငျသညျသနျ့ရှငျးမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်ကိုမည်သို့မသိရပါဘူး။
ယေဇကျေလ 11:19, 20 တှငျကြှနျုပျတို့ကိုဖတျ
" သူတို့ကိုငါတဦးတည်းနှလုံးကိုပေးမည်နှင့်အသစ်သောသဘောကိုငါသူတို့ကိုအတွင်းထားမည်။ ငါသည်သူတို့၏ဇာတိပကတိအထဲကကျောက်နှလုံးကိုနှုတ် ယူ. အသားနှလုံးကိုပေး, သူတို့သည်ငါ၏အထုံးအဖွဲ့တို့၌ကျင်လည်, ငါ့ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်အကြောင်း, ထိုသူတို့ပြုလိမ့်မည်။ သူတို့သည်လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုငါသည်လည်းသူတို့၏ဘုရားဖြစ်မည် "
နှင့်ဟေဗြဲ 8:10 အတွက်ကျနော်တို့အတူတူပင်ဟူသောဂတိတော်ဖတ်ပါ။ ဂလာတိ 5:16 : ", ဝိညာဉ်တော်အတွက်လမ်းလျှောက်, သငျသညျတပ်မက်ဇာတိပကတိ၏အလိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဘယ်သို့ငါပြောချင်ဒီက" , နှင့် 25 ကျမ်းပိုဒ် "ကျနော်တို့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်လျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဝိညာဉ်တော်သည်၌ကျင်လည်ကြကုန်အံ့။ "
ဒါဟာသို့ရာတွင်ငါ့အဘို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့ဒီအလိုဆန္ဒအတွက်ငါ့ထံသို့ပြောပြီ ယရှေုသညျမှန်သောစပျစ်နွယ်ပင် / မှန်သောစပျစ်နွယ်ပင်ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိ၏ပြောတတ်ဤတွင်ဆရာယောဟနျ 15 အတွက်ယေရှု၏စကားများဖြစ်ပါသည်, ပိုပြီးယေရှုကဲ့သို့နဲ့ရင့်ကျက်။ သူကသာကြောင်းအားဖြင့်သာအသီးကိုကြီးထွားမည်, စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်သောသူ၌တည်နေသည်ကပြောပါတယ်။ သူကစပျစ်နွယ်ပင်အတွက်förblivandetအားဖြင့်ကြွယ်ဝသောအသီးကိုသီးမှ (vi) ခွဲထွက်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ယေရှုသည်လည်းကျမ်းပိုဒ်5မှာပြောပါတယ် "သင်တို့သည်အလျှင်းမပွုနိုငျသညျငါ့ကိုမပါဘဲ ... ။ "
ငါအသီးကိုသီးသောစပျစ်နွယ်ပင်၏ဘဝ-ပေးခြင်းရည်, စပျစ်သီးထင်, ကိုယ်ကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်သည်, မိမိတက်ကြွအသက်တာ၏ပုံမှဟုဆိုနိုငျထင်ပါတယ်။
ဝိညာဉ်တော်၏အသီး ဂလာတိ 5:22 တှငျဖျောပွထား။ မှတ်ချက်ယင်းကြောင့် ဝိညာဉ်တော်၏အသီး ထွန်းသစ်စသော။ အဘယ်သူမျှမဂုဏ်အသရေအသီးကိုသီးသောဌာနခွဲတတ်၏။ ဒါကြောင့်အသီးကြီးထွားနိုင်အောင်သို့သော်စပျစ်နွယ်ပင်အတွက်လိုက်နာဌာနခွဲလုပ်ပါ။
ကျနော်တို့ကိုလည်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်လူတဦးတည်းချင်တဲ့လမ်းအသက်ရှင်လျက်, နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတတ်သောအရာကိုလျစ်လျူရှုမရနိုငျသောကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့တော်များမှယေရှုဟုခေါ်ကြသည် "သူသည်ထိုလူများနှင့်ပည့်တော်တို့ကိုခေါ်သူတို့ကို said: တစုံတယောက်သောသူသည်, ငါ့နောက်ကြွလာတော်မူသည်ကိုယ်တော်တိုင်ငြင်းပယ်ကြကုန်အံ့နှင့်မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်းငါ့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်ဆိုပါက။ " မာကု 8:34 ။
8, ငါ့အဘို့ဤမျှလောက်အသက်ရှင်လျက်ဖြစ်လာသည့်: ဖိလိပ္ပိ4ကနေစကားလုံးနှင့်အတူအဆုံး
" ထို့ပြင်ညီအစ်ကိုတွေကို (နှင့်ညီအစ်မများ), ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်သမျှ, ပဲ, စင်ကြယ်သောစစ်မှန်တဲ့နှင့်ဂုဏျသိက်ခာရှိရှိဖြစ်ပြီး, ခန့်မှန်း၏, ဟုတ်တယ်, သီလဟုခေါ်တွင်ခြင်းနှင့်ချီးမွမ်းထိုက်တန်ကြောင်းအားလုံးသည်ဤအရာများကိုအပေါ်စဉ်းစားသောသူအပေါင်းတို့သည်။ "